Sadio Mane oo Daboolka ka Qaaday Shuruudda Keliya ee uu Kusii Joogi Karayo Liverpool | Dhaymoole News
June 4, 2022 - Written by wariye999
Sadio Mane ayaa shaaciyey shuruudda kaliya ee uu kusii joogi karayo Liverpool oo sida la sheegay uu horraantii toddobaadkan ku wargeliyey in uu doonayo in uu iskaga tago xagaagan, maadaama qandaraaskiisa sannad kali ahi ka hadhsan yahay.
Xiddiga reerr Senegal ayaa maalmihii ugu dambeeyey la isla dhex-marayay warar sheegaya inuu heshiis la gaadhay kooxda reer Germany ee Bayern Munich oo siinaysa mushahar laba-jibbaar iyo dheeraad kasii badan midka uu waqtigan ka xoogsado Liverpool.
Sadio Mane oo ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaharka yar Liverpool ayaanay Reds mudnaan weyn siinin, waxaanay hoos iskaga dhigeenka hadalkiisa, halka ay ku mashquulsan yihiin Mohamed Salah oo la rumaysan yahay in ay xataa diyaar ula yihiin in toddobaadkii ay siiyaan £400,000 Gini, halka mushaharka Sadio Mane uu yahay £100,000 toddobaadkii.
Bayern Munich oo ka faa’iidaysanaysa mushkiladda mushahar yaraanta ee Mane ayaa waxay u xaqiijisatay in sannadkii ay siinayso £17 milyan oo Gini oo noqonaysa £325,000 Gini toddobaadkii.
Sida ay warbaahinta Ingiriisku xaqiijiyeen, Sadio Mane ayaa waxa uu hadda u xaqiijiyey Liverpool in uu sii joogayo haddii ay kasoo baxaan shuruud ah inay si aad ah mushaharkiisa sare ugu qaadaan oo ay gaadhsiiyaan heerka lacagta ay kooxaha kale ee doonaya u ballan-qaadayaan.
Horyaalka Premier League oo hadda ay ugu mushahar badan yihiin Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo iyo David de Gea oo uu soo raacayo Erling Haaland, ayaa waxa uu Mane dalbaday in mushaharkiisa si weyn sare loogu qaado.
Liverpool waxa hadda ugu mushahar badan difaaca reer Netherlands ee Virgil van Dijk oo toddobaadkii u xaadira lacag gaadhaysa £220,000, waxaanu laban-laab ka badan yahay Sadio Mane.
Jurgen Klopp iyo maamulka Liverpool ayay tahay inay miiska wada fadhiistaan oo ay go’aan ka gaadhaan inay aqbalaan dalabka Mane si ay ugu sii hayaan kooxda iyo inay fasaxaan oo uu ka dego Bayern Munich oo lacago badan ula diyaar ah.